XOOLAHA GUINEA BLUE: SHARAX, SAWIR, DARYEEL IYO DAYACTIR - BEERAHA DIGAAGA
Fowlaha guinea Blue: waxa ay u egyihiin, haddii ay guriga ku haysan karaan
In warshadaha digaaga ee caalamiga ah, haadda xoolaha ee guinea waxay ku jirtaa mid ka mid ah jagooyinka hoggaanka. Hilibka shimbiraha ee dhadhankiisa iyo sifooyinka wanaagsan ee aad uga sareeya digaag. Maanta waxaannu ka hadli doonnaa gawaarida guinea buluuga, sifooyinka iyo xaaladaha xabsiyada.
Noocyada noocyada waxay u sabab ahayd midabkiisu buluug-buluug aan caadi aheyn. Shimbiraha yar ee qiyaasta yar oo leh madax yar, midab casaan iyo midab isku mid ah. Gagaashu waxay soo celineysaa midabka cirifka, iyo xarriiqa mugdiga ah ee mugdiga ah ayaa si muuqata u muuqata oo ka muuqata indhaha madow. Madaxa ayaa ka baxsan baaluq, iyo inta u dhexeysa gagaarka iyo cayayaanka waxaa ku jira kobcinta buluuga ah ee caarada leh.
Iska hubi liiska duurjoogta duurjoogta ah iyo kaniisadaha guinada guinea.
Qoorta-qaabka qumman ayaa si habsami leh u gudubta jirka oval-qaabaysan. Cawl mugdi ah, qaylo madow ah oo qoorta ku xiran qoorta ayaa u dhow madaxa, iyo hadhka hadhka ah ee qoorta waa cawl-buluug. On back sloping, xabadka iyo baalal gaaban, midabka aasaasiga ah waxaa lagu qasi karaa lows cad. Waxaa xusid mudan in hoosku uusan ahayn meel kasta: baalasha, caloosha iyo dabada gaaban ee hoos u dhacda waxay yeelan kartaa boodhka lilac. Meelo xoog leh oo aad u ballaaran oo ku yaalla midab madow mugdi ah. Chicks cusub oo hatched leeyihiin buluug cawl-brown-ka, ka dib markii molt ugu horeysay waxay ku helaan sinta dabiiciga ah ee taranka.
Ma taqaanaa? Dalka Maraykanka, fowlka guinea ayaa caan ku ah beeralayda oo kaliya maadaama ay tahay hilibka dhadhan fiican leh, shimbirkani wuxuu ka caawiyaa in uu burburiyo cayayaanka iyo dulinyada, sida shilalka ihi, kuwaas oo khatar u ah bani-aadamka, sababtoo ah waxay qaadaan encephalitis.
Tixgeli wax soo saarista shimbirta boqoradda:
miisaanka labka ah - illaa 2 kg, dheddig - illaa 2.5 kg (boogta la riixay midab madow, whitens marka la kariyey);
wax soo saarka ukunta - ilaa 150 gogo ', miisaankeedu yahay ilaa 48 g mid kasta;
ukumaha shimbirta ah ee la jeexay oo leh qolof adag oo qaro leh, madow ka badan ukumaha digaaga;
oo leh habka socodka, geedka digaagga ayaa wax soo saar leh laga bilaabo Maarso illaa xilliga dayrta;
heerka bacriminta - 86%;
qiyaasta badbaadada dhalinyarada - 95%;
Qaangooyadu waxay timaaddaa sideed bilood.
Thanks to qolof weyn, ukunta ma aha oo kaliya laga ilaaliyo galka bakteeriyada, laakiin sidoo kale u dulqaadan gaadiidka.
Akhri waxyaalaha ku saabsan taranka iyo quudinta gogosha guinea xilliga jiilaalka.
Xaaladaha lagama maarmaanka u ah mawduuca
Gowrida Guinea waa shimbiraha yar yar ee cabbirka, sidaas darteed ma jiri doonto wax dhib ah oo meeleyntooda ah, waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro qoyaan iyo qandho kulul oo loogu talagalay iyaga, waxaa habboon in qolka gudaha loo diyaariyo.
Sidaa darteed, qolka iyo qaab-dhismeedkiisu waxay tilmaamayaan:
qashin - ilaa 15 cm dhererka balka, peat ama cows;
heerkulka heerkulka - + 14-18 ° C;
qoyaan - 60%, joogitaanka nidaamka hawo-gelinta, maqnaanshaha qoraalada;
iftiin - 16 saacadood maalintii;
cufnaanta meelaynta - 1 jibbaaran. m laba qof;
nasashada - xajin ilaa ilaa 50 cm dhererka dhulka;
hudheellada - waxay ku yaalaan meel gudcur ah;
Waa in ay jirtaa badanaa waraabinta maxaa yeelay shimbiruhu waxay u baahan yihiin biyo badan.
Waa muhiim! Maadaama haweenku ay ka cabsanayaan qaylada oo ay tuuraan qalabka, waxay u fiicantahay in ay ku daboosho shuruudaha naqshadda.
Nadiifi oo nadiifi qolka
Ballanqaadka caafimaadka xooluhu waa qol nadiif ah oo si fiican loo hayo, kuwaas oo tiro badan oo tallaabooyin lagu arkay:
Qashinka waa la beddelaa marka la nadiifiyo si looga saaro isku dhufashada bakteeriyada jiran.
Si aad u baabi'iso qoyaanka qashinka, waxaad isticmaali kartaa cabitaan nourleers, taas oo ay adagtahay in la boodo biyaha.
Si joogto ah u baahan tahay in la nadiifiyo qolka oo idil, nadiifiye nadiifiyaha ah.
Beeralayda dabiiciga ah ee khibrada leh waxay ku talinayaan inay dhulka ku rusheeyeen lime maran ka hor inta aan guriga la dhigin.
U hubso inaad bixiso nidaam hawleed, hawo nadiif ah waa muhiim, gaar ahaan cimilada qabow ee maqan la'aanta.
Labadii biloodba mar, nadiifinta guud waa la fuliyaa iyadoo la raacayo jeermiska dhismaha iyo qalabka oo idil.
Shimbiraha waa in si joogta ah loo baaraa si looga hortago caabuq fara badan oo cudurka ah.
Dhallinyaradu waxay caadeysteen dhaqdhaqaaqa xorta ah goobta si tartiib tartiib ah, marka hore waxaa lagu sii daayaa xerada xiran. Haddii loo maleynayo in si joogto ah u socdo nooca la xiray, markaas aagga socodka waa in uu ahaado ilaa 13 mitir oo laba jibbaaran. m
Si haraaga guinea ma aha in ay ka duulaan deyrka, waxaan kugula talinaynaa inaad ogaato sida si habboon u xoqdo baalasheeda.
Xaaladdan oo kale, ku xoortay geedaha waa in lagu beeraa dhulka, siinta hoyga nasashada kuleylka. U hubso inaad cabto cabitaanka socodka: shimbiraha waxay heli karaan istarooga kulaylka oo aan helin biyo. Guinea waxay ku fiddaa qulqulo ku wareegsan beerta, burburinta cayayaanka oo aan taaban dalagyada. Hase ahaatee, socodka banaanka waa wanaagsan yahay marka goobta ay ka fog tahay ilo kasta oo ka mid ah buuqa: wadada, ciyaarta ciyaarta. Intaa waxaa dheer, shimbiruhu waxay u baahan yihiin inay baalashooda googooyaan - waxay aad u awoodaan inay boodaan boodh yar.
Raashinka shimbiraha reer boqorku waa mid fudud:
toddobaadka ugu horreeya ee nolosha - ukunta la karkariyey, firida, jiiska, cagaarka;
Toddobaadkii labaad - bacaha wax lagu shiilo oo la burburiyo hadhuudh, cagaarka, cuntada qallalan ee tiro yar;
Isbuuca saddexaad, dhallinyaradu waa la sii daayaa si ay u socdaan, halkaas oo isaga qudhiisa uu soo saaro cayayaanka iyo gooryaanka.
Waa faa'iido leh in la barto sida loo daryeelo digaagga haadda guinea.
Carruurta waxaa lagu quudiyaa qaybo yar oo 6-8 jeer maalintii, dadka waaweyn 3 jeer. Waa in la xusuustaa in biyaha cusubi ay mar walba diyaar u yihiin shimbirahan. Cuntada dadka waaweyn:
cagaarka - nettle, dhir, qudaar, løvetann;
khudaarta - bocorka, kaabajka, baradhada, karootada, zucchini;
hadhuudhka - galley, sarreen, shaciir, miro, xabuub, firiley oo la kariyey;
Cunto qoyan - jiis, caano-fadhi, mallaar;
Waxyaabaha lagu daro - cirbadaha, dhagax dhagax, jeeso, saliid kalluun, khamiir, milix, hilib iyo lafo iyo cunto kalluun.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay halyeeygii hore ee Giriigga, ilaahyada waxay u jeesteen walaalaha Meleagrah ee kosareok, sababtoo ah waxay ku adkeysteen inay u naxariistaan ​​isaga. Ilaahyada ayaa ciqaabay geesi ay ku dhinteen adeerkiis, walaalkiis hooyadiis, isaga oo ku dhex jiray khilaafkii milatari. Xilligaas, aqoonyahanka Carl Linnaeus ayaa maskaxda ku hayaa magac laba-laab ah - Numida meleagris, isaga oo siiyay abaal-marin halyeeyadii iyo halyeeyadii.
Si loo soo koobo: Fowladaha guinea taranta waxay noqon karaan shaqo faa'iido leh, maadaama labadaba hilibka iyo ukunta labadaba ay yihiin kuwo aad u qiimeeya. Si xooluhu u kobciyaan sida caadiga ah uguna raaxaystaan ​​wax soo saar badan, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo daryeel caafimaad oo raaxo leh.